Stratis 2.1 တွင် LUKS2 ကို အသုံးပြု၍ partition encryption ကိုပံ့ပိုးသည် Linux မှ
Red Hat တည်ဆောက်သူများနှင့် Fedora အသိုင်းအဝိုင်း၊ မကြာသေးမီက၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည် စီမံကိန်း၏ဗားရှင်းအသစ် Stratis ၂.၁ ၇ လကြာအတူတကွလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်၎င်းသည် LUKS7 ကို အသုံးပြု၍ partition encryption ကိုအထောက်အပံ့ပြုရန်ဖြစ်သည်။
Stratis နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူများအတွက်၎င်းသည်သင်သိသင့်သည် Red Hat မှထုတ်လုပ်သော daemon နှင့် Fedora အသိုင်းအဝိုင်း အသုံးပြုသူနေရာချိန်ညှိချက်များကို စုစည်း၍ ရိုးရှင်းစေရန် အရာ D-Bus ကိုကျော် LVM အသံအတိုးအကျယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် XFS ဖိုင်စနစ်၏နောက်ခံ Linux သိုလှောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများ၏လက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများကို configure နှင့်စောင့်ကြည့်
နည်းလမ်းများစွာအနေဖြင့်စနစ်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့် ZFS နှင့် Btrfs အခန်းကန့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပြန်လုပ်သည်၊ သို့သော် Linux kernel-device-mapper subsystem (modules dm-thin, dm-cache, dm-) ၏ထိပ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအလွှာ (stratisd) အနေဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်သည် thinpool, dm-) DM ကျူးကျော်မှုနှင့်သမာဓိရှိ) နှင့် XFS ဖိုင်စနစ်။
1 Stratis အကြောင်း
2 Stratis 2.1 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
3 Stratis ကို install လုပ်နည်း
Stratis ရှိပြီးသားနည်းပညာအလွှာများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် ZFS / Btrfs စတိုင်အင်္ဂါရပ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်- Linux စက်၏မြေပုံစနစ်နှင့် XFS ဖိုင်စနစ်။ stratisd daemon သည် block devices collection များကိုစီမံခန့်ခွဲပြီး D-Bus API ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Stratis-CLI သည် command line tool တစ်ခုပေးသည် Stratis, နှင့်အလှည့်အတွက် stratisd နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် D-BUS ကို API ကိုအသုံးပြုသည်။
ZFS နှင့် Btrfs နှင့်မတူဘဲ Stratis အစိတ်အပိုင်းများသည်အသုံးပြုသူနေရာ၌သာအလုပ်လုပ်သည် သူတို့သည်သီးခြား kernel module များတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သိုလှောင်မှုစနစ်ကျွမ်းကျင်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုမလိုအပ်အဖြစ်အစပိုင်းတွင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် D-Bus API နှင့် cli-utility ကိုပေးထားသည်။ Stratis ကို LUKS (encrypted partitions), mdraid, dm-multipath, iSCSI, LVM logical volumes များအပြင် hard drives, SSDs နှင့် NVMe drives တွေကိုအခြေခံပြီး block devices တွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Stratis 2.1 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
စီမံကိန်း၏ဤဗားရှင်းအသစ်သည်ထင်ရှားသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထောက်ခံမှုထည့်သွင်း LUKS2 ကိုအသုံးပြုပြီး partition encryptionသော အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှု GNU / Linux ရှိအခန်းကန့်များနှင့်စာဝှက်ထားသောသိုလှောင်မှုယူနစ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုရန်။
ဤ encryption အမျိုးအစားကိုကိရိယာများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည် မိုဘိုင်း၊ လက်ပ်တော့နှင့်စက်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ခိုးယူခံရလျှင်ကာကွယ်လိုသောအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ခြင်း။
ပေါင်းစည်းသောအပြောင်းအလဲများနောက်ထပ် Stratis 2.1 ထဲမှာဖြစ်ပါတယ် ယခု / daemon သည် encryption support ကိုကိုင်တွယ်သည်။ အစီရင်ခံစာများ / တောင်းဆိုမှုများကိုပိတ်လိုက်သည် လွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူသောစာဝှက်စနစ်ပံ့ပိုးမှုပေးသောအခြားခေတ်မီ Linux ဖိုင်စနစ်များကိုစဉ်းစားခြင်းထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမှား။
The JSON ပုံစံဖြင့်အစီရင်ခံစာများထုတ်လုပ်ရန် D-Bus အစီရင်ခံစာမျက်နှာပြင်၊ အဖြစ်ပြန်လည်ရေးထားသော device ကို ID နှင့်ကန ဦး ကုဒ်အဖြစ်။
ဒီ stratisd daemon ၏ဗားရှင်းကို Dynamic verification
ဒါဟာအစကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ် RAID၊ ဒေတာချုံ့ခြင်း၊ deduplication နှင့်အမှားသည်းခံမှုကိုမထောက်ပံ့ရသေးပါ သူတို့သည်အနာဂတ်အတွက်စီစဉ်ထားသည်။
Finalmente သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင် ဒီဗားရှင်းအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍၊ သင်ပြောင်းလဲမှုစာရင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
Stratis ကို install လုပ်နည်း
Stratis ကို RHEL, CentOS, Fedora နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျရရှိနိုငျပါသညျ။ package သည် RHEL repositories နှင့်၎င်း၏ derivates များအတွင်း၌ရှိသောကြောင့်၎င်း၏ installation သည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
Stratis ကို install နိုင်ရန်အတွက် Terminal မှာအောက်ပါ command ကို run ပါ။
system ပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးတာနဲ့ Stratis န်ဆောင်မှုကို enable ရမည်ဖြစ်သည်၊ သူတို့ကအောက်ပါ command များကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာနောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ link သို့သွားနိုင်သည်။ https://stratis-storage.github.io/howto/
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Stratis 2.1 တွင် LUKS2 ကို အသုံးပြု၍ partition encryption ကိုထောက်ပံ့သည်
ဤအရာများသည် Elementary OS ၏ အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။